musha nyika dzakabatana Mabhirioni Mark Zuckerberg Childhood Indaba Nezve Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yese yeTech Tech Entrepreneur inonyatsozivikanwa nezita rekudanwa "Zuck". Yedu Mark Zuckerberg Yemwana Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira uye nhoroondo yemhuri. Kunyanya zvakadaro, akawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye Chief Executive Officer weFacebook. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveMark Zuckerberg's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Kutanga kubva, Mark Elliot Zuckerberg akazvarwa musi we 14th waMay 1984 muguta re White Plains, New York, United States.
Akanga ari wechipiri akaberekwa naamai vake Karen Kempner (muchengeti wepfungwa) uye kuna baba vake Edward Zuckerberg (dentist).
Mark akakurira mudunhu reDobbs Ferry kuNew York (10 makiromita kubva pakuberekwa kwake) pamwe nehanzvadzi dzake nhatu Arielle, Randi, uye Donna. Akanga achidiwa zvikuru nevanun'una vake avo vaimukoshesa sehama yavo voga uye vachitamba shamwari.
Kunyanya zvakadaro, Maka aishanda pamwe chete nehanzvadzi dzake avo vaigara vachishanyira kuhofisi yababa vavo yemazino. Ihofisi iyi yaive yemakomputa mu1985, gore mushure mekuzvarwa kwaMark. Zvaingova zvechivanhu kuti vanin'ina vacho vazvivaraidze nehunyanzvi pahofisi yababa vavo (iri pasi pemba imwechete yemba yavo) pamwe nerally yakatenderedza Mark uyo kufarira kwake kuronga kwaive kuchikurumidza kuve kupindwa muropa.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: dzidzo
Kunyangwe kufarira kwaMako mumakomputa kwakatanga panguva yake yepuraimari mazuva echikoro, dzidzo yepamusorosoro haina kuita zvishoma kumuraira pakuve iye ari programming geek uye internet muzvinabhizimusi iye zvaari nhasi. pamusoro pezve aive autodidact uyo aizvidzidzisa iye yakaoma mutauro wecomputer weC ++.
Mako ainyanya kudzidziswa kuburikidza nenzira dzisina kurongwa nababa vake vakamudzidzisa Atari BASIC. Akashandisa ruzivo rwake rwaakawana rweAtari BASIC kugadzira chirongwa chinozivikanwa se "ZuckNet". Zucknet yakatumirwa semutumwa iyo yaifambisa kutaurirana pakati pemakomputa mumba maZuckerberg. Yaishandiswawo nababa vaMark receptionist kumuudza nezvevarwere vanouya vasina kupopota.
Akasekeserwa nekubudirira kwaZucknet, Edward Zuckerberg akawana masevhisi emudzidzisi wepacomputer David Newman uyo akatora kufarira kwaMako pakuronga kusvika kumatunhu akakwirira. Chikoro chepamusoro chakavhura hwindo kuti Mark awedzere hushamwari neTech Savvy vakomana vezera rake. Akaita shamwari dzinoverengeka dzakanangana nechinangwa chakakurumbira pakati pawo aive Adam D'Angelo. Maka akashanda naAdam pasi pekambani inozivikanwa seIntelligent Media Group.
Iyo yekutanga kambani yakasikwa yaive Synapse Media Player, software yakagadzirirwa kusimudzira nziyo zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi. Synapse Media player yakatora kufarira kubva kuMicrosoft neAOL iyo yaida kuiwana. Nekudaro, Maka akaramba kupihwa kubva kuI giants kusanganisira iwo wenguva yakazara mukana webasa.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Maka anga asiri iye wekuzorora pamaoko ake nezvirongwa zviviri zvekutanga zvaakange atogadzira (Zucknet uye Synapse Player). Aive mukomana ane chinzvimbo uyo ane shungu yekukodha uye kuvandudza software nyowani yakaramba ichienderera paPhillips Exeter Academy. Yaiva pachikoro chepamusoro apo Mark aizivikanwa kuenzanisa basa nekutamba. Akatora chinzvimbo chakasimba mukudzivirira zvekuti akasimuka kuti ave kaputeni wechikwata chekuchengera chikoro.
2002 raive gore rakakosha kunaMark sezvaakanyoresa kuYunivhesiti yeHavard kudzidza Psychology. Hazvina kutora nguva refu asati azivikanwa semupurogiramu pamusasa. Akararama zvinoenderana nechinzvimbo chake nekugadzira zvirongwa zvainakidza munharaunda yekudzidzira.
Chokutanga pakati pemigumisiro yaaiita inotungamirirwa ndiyo yaive yakasikwa yeChese Match, nzvimbo yakagadzirirwa kubatsira veVadzidzi veHadard University mukusarudza nzira yavo yaidikanwa nekupa tsanangudzo pamusoro pechiverengero uye rwandu rwevadzidzi vakanyoresa.
Mukuwedzera, akasika Facemash, webhusaiti yakaita kuti vadzidzi vagofananidza zvifananidzo zvevamwe vanodzidza navo pasi nechinangwa chekutarisa kuti ndiani anotarisa achipisa.
Iyo webhusaiti haina kufamba zvakanaka sezvo yaifungidzirwa kunge yakashandisa mafoto evadzidzi vasina mvumo yekutanga. Nekuda kweizvozvo, zvakabviswa pasi apo Mako akaitwa kukumbira ruregerero.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Mwedzi miviri mushure mekuwa kwe Facemash Mark akapedza nguva achifungisisa pane zvaizoitwa purojekiti inotevera. Akazopedzisira awana ruzivo mushure mekudzidzira muHadard, Divya Narendra akagovera pfungwa na Mark pamusoro pokugadzira nzvimbo dzekugara panzvimbo dzevadzidzi.
Divya Narendra (akafananidzirwa pazasi nemaTwins shamwari dzake) akauya kunaMark chete nekuti vamwe vake, Tyler naCameron Winklevoss vaive vasiri-programmers vaida hunyanzvi hwaMark kuti vachinje pfungwa yavo kuti ive yechokwadi.
Mark akabvumirana kushanda purojekiti yainzi inozivikanwa saHarvard Connection (yakazotumidzwa zvakare kuti ConnectU). Chirongwa chacho chaiva nechinangwa chekugonesa nhengo dzeHadard academic community post yemashoko evanhu, mapikicha uye anoshanda anobatana pamusoro pavo.
Yakanga iri mukati mekugadzira kodhi yekodhi yekuita iyo system kuti ishande iyo Mark akaumba zano rake rakakosha nezve facebook. Izvo hazvina kutora nguva kuti iyo coding genius kuvandudza Facebook pamwe nekuzvinyoresa pamwe nezita rezita, TheFacebook.com ikozvino yave kuziva seFacebook. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kufanana nevazhinji vekugadzira tekinoroji, kwaingove nemukadzi muhupenyu hwaMark Zuckerberg anoenda anonzi Priscilla Chan. Tinokuunzira iyo isingataurike nyaya yekuti vakasangana sei uye vakaroora.
Chan akarererwa naambuya vake mune hurombo hwekugara. Zvisinei, akanga akatsunga kuwana dzidzo yepamusoro pamatambudziko ose uye kushivirira kwake kwakamuwanira nzvimbo paIvayard University.
Akasangana naMark kekutanga akamira pamutsetse kuti ashandise imba yekugezera panguva yemutambo wakarongedzwa nehama yaZuckerberg mu2003. Rwavo rwaive rudo pakutanga pakuona rwakateverwa nateedzano yekufambidzana.
Achitaura pamusoro pezvakaita kuti akwekwe kuna Mako, Prisilla akazvizivisa;
"Maka aive Uyu murume ane nerdy pamusasa ane hunhu hwebasa asi ini ndaimuda zvakadaro"
Nguva yekutanga yehukama hwavo yakauya pane imwe nguva apo Mark aive mudzidzi wekoroji wegaji uye akanga asati aita kubudirira ne Facebook. Zvechokwadi, akanga asingadikanwi nemumwe musikana ari pamusasa nekuda kwekushaya kwake website ye Facemash iyo yakakanganisa Havard Students.
Zvakangodaro, chan aida Mark zvakanyanya uye iye aimuda iye zvakafanana chiyero. Pane imwe nguva, Maka akatora nguva kubva kumakodhi ake echirongwa kudzidza chiChinese nechinangwa chekurondedzera zvakanaka nevabereki vaChan.
Hukama hwavo hwaive husiri mubhedha wemarosi kunyangwe mushure mekubudirira kwaMark neFacebook. Ivo vaviri vakapfuura nepakati pekuyedza nguva uye vakatora sarudzo dzakakosha. Chinozivikanwa pakati pesarudzo kwaive kudonha kwaMark kuHavard pamwe nehurongwa hweDialogue pakutsvaga kwekutenga kwaYahoo kuti utore Facebook yemadhora mabhiriyoni.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: muchato
Vaviri ava vakaita muchato wakashamisika mushure memakore mapfumbamwe ekufambidzana. Chiitiko ichi chakaitika mumba maMark Palo Alto uye chakaratidza kekutanga nguva iyo Mako akapfeka sutu kwete yake Yezvokutengeserana hoodie.
Ukama hwavo hwakakomborerwa nevasikana vaviri, Maxima Chan Zuckerberg (Akaberekerwa 2015) uye August Chan Zuckerberg (Akazvarwa mu2017).
Kufambira mberi kwakanyanya kune zuva Chan kunoshanda semudzidzisi wekuchikoro nekuda kwekuda kwake vana uye kutenda mune simba redzidzo semhando huru yekuzivisa shanduko.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Nevabereki Vake
Mark Zuckerberg akakurira mumhuri ine rudo yevamiriri ve6 tinokuudzai nezvemhuri yake.
Pamusoro paBaba Vake; Edward Zuckerberg ndiye baba vaMark. Ane makumi emakore ane ruzivo akashanda sechiremba wemazino uye iye zvino anoshumira semurevereri wekushandiswa kwakanaka kwehupenyu hwehupfumi mukubatanidza nekuvaka hukama pakati pevarume vezvechiremba nevarwere.
Mukuwedzera, iye munyori wezvinyorwa zvakawanda zvinorondedzera kushambadzira kwemashoko ezvehupfumi, teknolojia yezvesayenzi, uye mapurogiramu emagazini masayenzi.
Nezvaamai Vake; Karen Kemper ndiye amai vaMark. Ano mumwe mudzidzi weWillowy Brooklyn College uye ane nheyo yakasimba ye Queens. Akaroorana naEdwin mu 1979 mushure mokunge vakadzokera kuWhite Plains uko Mark akaberekwa.
Iye zvino anoshanda sechiremba wepfungwa ane chiremba uye anobatsira kuona kune hutano hwepfungwa hwemhuri yake iri kuwedzera.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Nevanin'ina vake
Hanzvadzi dzaMark Zuckerberg dzinosanganisira Randi, Donna naArielle.
Randi Zuckerberg aimbova mutungamiriri wekugadzirwa kwemakambani uyewo mutauri we Facebook.
Dangwe remukoma waZuckerberg parizvino ndiye CEO weZuckerberg Media pamwe nemunyori wemabhuku ekuzvibatsira uye asiri emanyepo.
Donna Zuckerberg ndiye munyori pamwe chete nemusangano wekutanga weEidolon. Wechitatu akaberekerwa mukoma weZuckerberg mudzidzisi paTelpaideia uye Stanford Continuing Studies.
Iyewo munyori wevanorwisa-racist uye anti-sexist mabhuku kusanganisira Kwete Vose Vakafa Vakachena Varume pamwe chete neClassics uye Misogyny muDhigrim Age.
Arielle Zuckerberg iivo gotwe pahama dzaZuckerberg. Iye akapedza kudzidza kuClaremont McKenna College muClaremont, Calif.
Arielle ane ruzivo rwekushanda semukuru wechigadzirwa chemiti yeWorfire, kambani yemapurisa software iyo yakawanikwa neGoogle. Anoshuva kuva ngirozi mutengi anopa mbeu inoshandiswa pakugadzirwa kwekambani.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Maitiro Evanhu
Mark Zuckerberg ane maitiro anotevera kumunhu hwake
Kushingairira; Zuckerberg ane shungu dzekushandura mazano kuita chokwadi. Izvi zvinoratidzwa nemabatiro aakaitwa naDivya Narendra uye neWinklevoss Twins kuti vabatsire kushandura Pfungwa yavo yeHarvard Connection (yakazotumidzwazve kunzi ConnectU).
Unyanzvi hwehutungamiri; Facebook ingadai isina kuve inotungamira pasocial network sezvazviri nhasi dai Zuckerberg asina kutora sarudzo dzakakosha dzehutungamiriri kusanganisira kudzora kushandiswa kweFacebook nevashandi kuitira kuti vawedzere kugadzirwa kwavo pabasa. Kunyanya zvakadaro, haana hofisi yakakosha asi ane dhesiki muhofisi yakavhurika nevamwe vashandi veFacebook.
Kuzvikudza; Maka mutsitsi nemoyo uye anga achipa kune zvemagariro zvikonzero. Akavimbisa kupa hafu yehupfumi hwake kuzvikonzero zvinobatsira nekusaina "The Giving Pledge“. Vamwe Vakakurumbira vanhu vakasaina chitsidzo vanosanganisira Masuo eBill uye buffet warren.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Mimwe Miitiro
Usambosiya; Maka anodzoka zviri nyore kubva kuzvipingaidzo uye anokunda matambudziko kana zvipingamupinyi zvakakandwa munzira yake. Chinozivikanwa pakati pezvipingamupinyi zvake kukunda mhaka dzakamhan'arwa kwaari neWinklevoss Twins Anenge mazuva matanhatu mushure mekutanga kweFacebook. Iwo Winklevoss Mapatya naDivya Narendra vakapomera Mako kuti abira zano ravo kuti vagadzire Facebook. Zvinoenderana nezvipupuriro zvavo, Zuckerberg akashandisa mhedzisiro yebasa rake paHarvardConnection.com kugadzira Facebook.
Vatatu vakaenderera mberi nekumhan'arira Mark, zvisinei, nyaya yacho yakazogadzikwa mukuda kwaMark. Chiitiko ichi chiri chimwe chete chematare edzimhosva akundwa naMark nemishumo inoratidza kuti mapatya akabhadharwa mari inosvika mamirioni makumi matanhatu nemashanu asi Narendra akaitwa muridzi we65 muzana weFacebook.
Kuranga; Iye ane mamiriyoni ane tarenda uye ane unyanzvi hwakasiyana-siyana hwakasiyana. Kuranga uye kugarisa kwave kuri maiti echokwadi ekubudirira kwake.
Chitendero; Kunyange zvazvo Mrk aikwidziridzwa vaJudha nechitendero, akambozvidza kutenda kwake, uye akazviti haana Mwari. Zvisinei, akawana chitendero makore maviri akapfuura (mu 2016) uye akaita kuti azive maitiro ake nekuda mudzimai wake, mwanasikana nembwa Krisimasi inofadza. Paakabvunzwa kana akanga asingatendi kuna Mwari akapindura izvozvo;
"Aihwa. Ndakakurira muJudha uye ipapo ndakapfuura nenguva yandakazobvunza zvinhu, asi iye zvino ndinotenda chitendero chakakosha zvikuru. "
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Nicknamames
Mark Zuckerberg ane nicknames shomanana. Shamwari dzake neshamwari dzake dzinomudana Zuck. Kuna mai vake nevanin'ina vake, anozivikanwa se Princely. Mukuwedzera, akabvuma zita rainzi, Slayer mushure mekubatana neshamwari yake inonzi Alpha Epsilon Pi.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Fan Of Star Wars Movies
Mark Zuckerberg akakurira nyota hondo mafirimu uye haana kumbomira kuda iyo movie kusvika zvino. Tinokuunzai maitiro mashomanana umo akaratidza kuti rudo rwake rwemafirimu inoenderana nemashoko.
Kufanana neshoko rekutenda, Mark akatanga nekuzviti rudo rwake kune mafirimu.
Paive nenguva yaakapfekedza mwanasikana wake wekutanga max saObi-Wan pamwe nekurumbidza kupfeka ne BB-8 toy, lightaber pamwe neChewbacca neDarth Vader matoyi akapinza.
Kwete iye chete mwanasikana, iye akambopfekedza imbwa yake, Chikara seSith uyezve akarumbidza kupfekedzwa nered lightaber uye Jedi cowl.
Kuti ave korona iyo yose yaakambokoka vanhu vemahedheni kusvika kuhofisi yepaIndaneti muPalo Alto apo vaine musangano unobudirira mu2016.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Havard Degree
Kunyange zvazvo Mark Zuckerberg akasiya chikoro mu2004, akayeukwa kuti atore chikamu chekuremekedza mu2017 uyewo kupa hurukuro yekutanga kuchikoro che2017 kupedza.
Achirwira hurukuro yake pachiitiko ichocho, Mark Akarumbidza vadzidzi vaipedza kudzidza kubudirira pane zvaasina kumbobvira sevadzidzi venguva imwe yeHadard. Mako akanga asina kushevedzwa sezvaakaudza kirasi yaipedza kudzidza asati atanga kutaura kwake;
"Kana ndikapfuura nemutauro uyu, ndiyo ichava yokutanga ini kupedzisa chimwe chinhu paHarvard,".
Mushure mechiitiko ichi, akabatana nemazana evatsva vakapedza kudzidza mukuzivisa kwake 'kubudirira kubudirira' paFacebook kufadza amai vake.
Mark Zuckerberg Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Marks inotakura tema yake tema shati kakawanda nokuti inomubvumira Tarisa pane zvimwe zvinhu zvinokosha.
Iye ndiye nhengo yakanyoreswa Mupiro pamwe chete nemutsigiri wezvipo zvemuviri.
Anotaura mitauro ye6 kusanganisira Chirungu, ChiHebheru, French, Latin, Greek, uye Mandarin Chinese.
Ane mutsvuku-mutema ruvara bofu. Ichi ndicho chikonzero nei Facebook ruvara rwebhuruu nekuti iye anoona bhuruu zvakajeka kupfuura chero rumwe ruvara. Pazasi pane kuratidzwa kwezvinoonekwa naMark nezvitsvuku uye Green Colors.
Zvinofadza kuti imbwa yaMark Zuckerberg, Chikara, ine a Facebook peji uye pamusoro mamiriyoni 2.7 vateveri !.
"The Social Network" iyo firimu yakafuridzirwa nezvakaitika muupenyu hwaMarko.
Maka ishamwari naVin Diesel uye akange amuteterera kuti aite xXx sequel.
MITEMO UCHOONA: Vongai nekuverenga kwedu Mark Zuckerberg Childhoodhood Nhau pamwe untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!